यस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू, तपाईमा पनि छन् की ? - समृद्ध नेपाल
मुस्कान राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे ।लुक्स र आकर्षण हुन त दीर्घ स म्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ ।
स्वभाव कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ । एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो स म्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आकर्षित गर्छ ।
ह्युमर यदि महिललाई हसाउँने क्षमता छ भने तपाइँ पनि सफल पुरुष हो । किन भने महिलाहरुले आफूसँग संगत भएको पुरुषमा सेन्स अफ ह्युमर चाहन्छन् । यस्ता पुरुषले महिलामा प्रभाव छोड्न सक्छन् । बनौट : शरीरको बनौट पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि पुरुषको शारीरक बनौटसँग महिलाको चासो हुन्छ । एक रिपोर्टका अनुसार महिला अधिकाँश महिलालाई अत्याधिक अग्ला वा होंचा भन्दा औषत उचाइ भएका पुरुष मन पर्छन् ।
आज तेस्रो दिन नायिका करिस्माको एसइइ कस्तो भयो त भिडियो सहित !
आकाशले भरे पूजाको सिउदो !
सज्जा चौलागाईले नेपाल आईडल जितेपछि रचना रिमालले यस्तो भनिन । आईडलभित्र कस्लाई कोरोना लागेको हो ? भिडियो हेर्नुस)
मेरो पहिलो ब्लग भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला !
छोरी पारीतोशिकालाइ सम्झेर भाबुक भए मनोज राज !
धुर्मुस सुन्तलीको प्रेम !
काजल अग्र माल्दिभ्सको समुद्रमा बोल्ड बिकिनी पोज, तस्वीर सहित !
अन्जु पन्त छोरीको खुशीका लागि दोस्रो विवाह गर्दै !
चोरीको आरोपपछि शव्द फेरेर शिशिर भण्डारीको ‘फोटो फिरिममा- २’ को भिडियो आयो !